Fametahana - Zava-doza mampidi-doza eo amin'ny zatovo
Famoronana - fampivoarana mampidi-doza Firaisana ara-nofo & fanazavana
Ny fampitandremana dia mety ho loza mitatao ho an'ireo voakasika
Famaranana ny famaranana - aza atao tsinontsinona ny sexting!
Ny teny hoe sexting dia mirakitra ny teny hoe firaisana ara-nofo sy ny SMS ary ahitana ny famoahana votoaty erotic amin'ny Whatsapp na tambajotra sosialy toy ny Facebook. Amin'ny lafiny iray bebe kokoa, ny sexting dia ahitana ihany koa ny famoahana sy fizarana sary amin'ny fanontaniana mampiahiahy sy ny ampahany manokana.
Io fironana tanora io dia heverina ho tena mampiahiahy ankehitriny, satria matetika ireo sary nalefa na nakarina dia mianjera amin'ny tanana diso.
Tranonkala an-tserasera amin'ny Internet - The Virtual Striptease
Matetika, ireo sary natao ho an'ny namana na olon-kafa dia miafara amin'ny tranonkala mamoafady, izay ampiasain'ireo mpamatsy azy tsy misy fanekena manokana.
Amin'ny ankapobeny dia misy loza iray izay hafatra nalefa tamin'ny votoaty am-bava, satria ny ankapobeny dia tsy manan-kery ary tsy misy intsony ny fanaraha-maso ny mety hiverina.
Nahoana ny sexting no malaza eo anivon'ny tanora?
Ny tanora matetika indrindra amin'ny taonan'ny fahamaotinana dia maniry ny hanaporofoana zavatra amin'ny olon-kafa. Matetika ny votoaty erotika dia alefa amin'ny namana mba hampiseho ny hatsaran-tarehin'ny vatany sy hiderana azy ireo.
Amin'izany fomba izany dia mampitombo ny fitiavan-tenany ny tanora ary mandray soa avy amin'ny sexting. Ankoatr'izay, ny fandefasana votoaty erotic dia ampiasaina voalohany indrindra amin'ny fifandraisana mba hampisehoana ilay mpiara-miasa ny fitiavany sy ny firaisana ara-nofo.
Mazava ho azy fa misy loza ho an'ny mpampiasa ny sexting, satria ireo no tanora indrindra. Araka ny fantatrao, ny fifandraisana dia tsy maharitra ela ao anatin'izao vanim-potoana izao ary azo ampiasaina avy amina antoko iray hanery ny hafa. Amin'ity toe-javatra ity dia matetika no atahorana ny famoahana ireo sary, indrindra amin'ny tambajotra sosialy toy ny Facebook na Twitter.
Famaranana - tandremo, izay ambaranao zavatra momba ny tenanao!
Na dia tsy nahy aza izy dia afaka maniraka ny votoatiny, raha ny hafatra Whatsapp, ohatra, dia nalefa ho an'ny olona maromaro. Ankoatra izany, nahazo sary matetika ireo sary, izay mety hitarika amin'ny tarehin-javatra mahamenatra rehefa maneho ny galerany mba hanehoana ny sarin'ireo olona fahatelo.
Ny fandraisan'anjaran'ireo sarangan'olona tsy ampy taona dia fandrahonana goavana, satria ity dia azo raisina ho toy ny raharaha momba ny pôrnôgrafia.
Ahoana no ahafahanao miaro tena toy ny mpanemotra na mpanolotra amin'ny loza araka izay azo atao?
Amin'ny maha-mpandefa azy dia alefao ny fanamafisana ny votoaty erotic. Tokony hanamarina indroa ny mpizara ary alamino ny fanovana an-tariby.
Ohatra, rehefa mampakatra sary ao amin'ny Facebook, dia azo faritana ny mpanatrika. Ankoatr'izay, ny intimals dia tsy tokony hampiseho ny endrika na ny endri-javatra manokana, mba tsy ho simba amin'ny fizarana ho sazy. Raha misy sary miboridana ao amin'ny Sexting dia tokony hanafoana ny sary na dia eo aza ny mety hisintonana azy.
Amin'ny alalan'io fepetra io dia tsy misy intsony ny votoaty mamoafady (ankizy) ary noho izany dia azo antoka fa eo amin'ny lafiny azo antoka. Ankoatr'izay, mety ho tratran'ny famoahana tsy ankatoavina raha misy fampiasa amin'ny smartphone amin'ny alalan'ny namana na fatiantoka.
Ny fampitandremana dia tsy ampiasain'ny tanora maro loatra, izay mampitombo ny mety hisian'ny fampielezana tsy mila. Mazava ho azy, raha zatovo ianao, dia azo inoana kokoa ny faneren'ny namanao ary mandefa sary be fitiavana avy amin'ny fitaoman'ny namany.
Na dia izany aza, tsy misy olona te hiseho amin'ny tranonkala mamoafady tsy misy ny faneken'izy ireo ary mety mitanjaka ara-bakiteny eo anoloan'ny vahoaka an-tapitrisany.
Noho izany dia zava-dehibe ny fiheverana farafaharatsiny ny loza ateraky ny sexting ary handray fepetra mifandraika amin'izany. Tokony hifantina hatrany ny olona izay tena mandefa ny sary ianao ary raha toa ianao noho ny tsy fahampian'ny mpampiasa Smartphone dia manisy lisitra ny fifandraisana amin'ny maha-olona azy. Ny soso-kevitra indrindra dia ny fandefasana votoaty erotika izay mahatonga anao tsy hay fantarina ary tsy ny endrik'olona na ny endrika hafa.
Amin'ny farany, misy foana ny fandrahonana, ka tokony hanontany tena ianao hoe fara androany ny filàna an'io fironana tanora io.